"अफ्रिकाले क्युबेक विशेषज्ञता र यसको उत्तरी अमेरिकी व्यावहारिकताको कदर गर्दछ" - Jeune Afrique - TELES RELAY
"अफ्रिकाले क्युबेक विशेषज्ञता र यसको उत्तरी अमेरिकी व्यावहारिकताको कदर गर्दछ" - जुने अफ्रिक
१ months औं फ्रान्सोफोनी शिखर सम्मेलन हुनुभन्दा केही महिना अघि क्युबेक कूटनीति प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यमा प्रान्तको प्राथमिकतालाई हेरेका थिए।
क्युबेक-अफ्रीका: शब्दहरूबाट कार्यहरूमा
कोरोनाभाइरस द्वारा कब्जा गरिएको २०२० एजेन्डा पछि, नाडाइन जिराल्टले क्यालेन्डरको नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्ने आशा राख्छिन्। उनी अझै पनि यस वर्ष आफ्नो सरकारको "अफ्रीका भिजन" लाई अनावरण गर्ने योजनामा ​​छन् र अर्को ओआईएफ शिखर सम्मेलनमा उनको फ्रान्सेली भाषी साझेदारहरु - एक बर्ष ढिलो संग - भेट गर्न पहिल्यै प्रतिक्षा गरिरहेकी छन्।
२०१ in मा क्युबेक कूटनीति का पदभार लिनु अघि निजी क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्ने संयुक्त राज्यमा जन्मिएका हाईटियनसँग भेट।
जुने अफ्रिक: २०१ In मा, तपाइँले क्युबेकको लागि "भिजन अफ्रिका" को परिभाषा घोषणा गर्नुभयो। जब तपाइँ मुख्य घटकहरु प्रकट गर्नुहुन्छ?
नाडाइन गिराल्ट: कोविड -१ ले आफ्नो हिस्सामा बाधा उत्पन्न गरेको छ र विशेष सरकारी गतिविधिहरूको योजनालाई प्रभावित गरेको छ, विशेष गरी अफ्रिकामा हाम्रो स्थिति रणनीति सुरू गर्ने सम्बन्धमा। हामी अनुहार आमनेसामने भेट गर्न अनुमति दिनुहुने घटनाको दौरान हामी मुख्य कम्पोनेन्टहरू, साथै उनीहरूसँग सम्बन्धित साधनहरू अनावरण गर्न चाहन्छौं। महामारीको विकासमा निर्भर, २०२१ को अन्तिम क्वाटरमा यस रणनीतिलाई आधिकारिक रूपमा सुरू गर्नका लागि राम्रो समय हुन सक्छ। जे भए पनि हामीले महाद्वीपमा लिइरहेका कार्यहरू पहिल्यै यस प्राथमिकतामा रहेका प्राथमिकताहरू पालना गरिरहेका छन्।
तपाईं यसलाई कसरी संक्षेप गर्नुहुन्छ?
यो दर्शनले अफ-अफ्रिकामा क्युबेकको कार्यको संरचना, एउटा सह-विकास दृष्टिकोण अनुसरण गर्दै एट्लान्टिकका दुबै पक्षहरूमा थप मूल्य र रोजगारी सिर्जना गर्न समावेश गर्दछ। यसको परिभाषा क्युबेक र अफ्रिका बीचको कम्पनीहरुदेखि हाम्रो विश्वविद्यालयहरुमा पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगठन लगायतका पार्टनरशिप स्थापना गर्न योगदान पुर्‍याउने विभिन्न खेलाडीहरु संग विस्तृत परामर्श पछि परिभाषित गरिएको थियो।
२०2050० सम्ममा महाद्वीपमा 700०० मिलियन फ्र्यानकोफोनहरू हुनुपर्दछ
पाँच स्तम्भहरू पहिचान गरिएको छ: अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रिय एकता र संस्थागत क्षमता निर्माण। प्रत्येक विशेषज्ञताको क्षेत्रसँग मिल्छ जुन क्युबेकले आफ्नो अफ्रिकी साझेदारहरूको फाइदाको लागि साझेदारी गर्न सक्दछ। २०2050० सम्ममा महाद्वीपमा 700०० मिलियन फ्र्यानकोफोनहरू हुनुपर्दछ। त्यसकारण म विश्वस्त छु कि फ्रान्सेली भाषाले हाम्रो व्यावसायिक र आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छ। हाम्रो भिजन अफ्रिकाले यस कन्सोलिडेसनलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्छ र महाद्वीपको विकासमा योगदान पुर्‍याउनु पर्दछ।
के अफ्रिका-क्यूबेक शिखर सम्मेलनको अन्तिम सिर्जना अझै प्रासंगिक छ?
हामी हाम्रो प्रतिबिम्ब जारी छ। क्युबेकले महादेशका विभिन्न देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा गर्व छ: उनीहरूले हामीलाई विभिन्न क्षेत्रहरूको विस्तृत समझ विकास गर्न र हाम्रा कम्पनीहरूका लागि ढोका खोल्न अनुमति दिए। त्यसकारण हामी क्युबेकमा प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिएको अफ्रिक विस्तार फोरम जस्ता प्रमुख कार्यक्रमहरूमा हाम्रो सहभागिता बढाउन चाहन्छौं जसले महाद्वीपसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
के तपाईंले यो दर्शन परिभाषित गर्न अफ्रिकी प्रवासीहरूलाई संलग्न गर्नमा सफल हुनुभयो?
तिनीहरू महास with्घको साथ मल्टिसेक्टोरल पुलहरूको निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्ने पहलहरूको मुटुमा छन्। प्रवासी र उनीहरूको मूल देशको बिच संरक्षित लिंकले अफ्रिसँग क्युबेकको सम्बन्धलाई समृद्ध गर्ने विशेषज्ञताको आदानप्रदान र विशेषज्ञता बाँड्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
ला फ्रान्सोफोनीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (OIF) ले यस वर्षको अन्त्यमा जर्बामा शिखर सम्मेलन गर्ने छ। क्युबेकको कस्तो एजेन्डाको साथ?
क्युबेक यस शिखर सम्मेलनमा तीन प्राथमिकताका मुद्दाहरूको वरिपरि परिचालन गर्नेछ: आर्थिक विकास, डिजिटल टेक्नोलोजी र, निश्चित रूपमा फ्रान्सेली भाषा, नवीनता र आधुनिकताको भेक्टरको रूपमा। यो यही हो जसले हाम्रो समुदायलाई एकसाथ बाँध्छ र यसले फ्रान्सोफोनी भित्र आर्थिक विकास र व्यापारिक लि of्कहरूको सिर्जनाको लागि एक मजबूत लीवरको गठन गर्नुपर्दछ।
OIF ले क्युबेकको विदेश नीतिमा कस्तो भूमिका खेल्छ?
यो क्युबेकको लागि अतुलनीय फोरम हो जसले fifty० बर्षसम्म फ्रान्सोफोनीका states 87 अन्य राज्यहरू र सरकारहरूसँगको आफ्नो पहिचान, यसको मूल्य, संस्कृति र आफ्नो प्राथमिकताहरूको रक्षा गर्न आफ्नै आवाज सुन्न सक्षम भएको छ - जसको साथ हामी दिन्छौं हामी हाम्रो राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दछौं।
यो पनि याद राख्नु पर्छ कि यस नेटवर्कमा हाम्रो सदस्यता महाद्वीपका धेरै देशहरूसँगको हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको एक आधार हो।
क्युबेकले वर्तमान महासचिव लुइस मुशिकिवाबोले चाहेको निर्देशनको बारेमा के सोच्दछन्, उदाहरणका लागि चुनावी शासनका सर्तहरूमा ओआईएफ बढी संलग्न भएको हेर्न चाहन्छन्?
OIF को दृश्यता बढाउने यो पहल क्युबेक लगायत सदस्य राष्ट्रहरू र सरकारहरूले राम्रोसँग प्राप्त गरे। त्यसकारण हामी OIF को कूटनीतिक र सहयोग कार्यलाई आधुनिकीकरण गर्न गरिएका सुधारहरूको समर्थन गर्दछौं। हामी प्रशासनिक शासन, पारदर्शिता र संगठनको राम्रो व्यवस्थापनमा ध्यान दिन चाहन्छौं। हामी पनि फ्रान्सेली भाषा बोल्ने संसारमा जनसंख्यालाई फाइदा पुर्‍याउने कार्यक्रमहरूमा बहुसंख्यक स्रोतहरू समर्पित गर्न चाहन्छौं।
अफ्रिका आज विश्वका धेरै देशहरूको तर्फबाट याद गरिएको ब्याजको वस्तु हो। क्युबेकका तुलनात्मक फाइदाहरू के हुन्?
हामी महाद्वीपमा धेरै राम्रो प्रतिष्ठाको आनन्द लिन्छौं र हामी त्यहाँ लामो समयदेखि मित्रता कायम राख्छौं प्रशिक्षित पुस्ताहरूका लागि, माघ्रेबदेखि दक्षिण अफ्रिका सम्म। महाद्वीपले क्युबेक विशेषज्ञता र यसको उत्तरी अमेरिकी व्यावहारिकताको कदर गर्दछ, जसले क्युबेकलाई अफ्रिकी देशहरूमा अन्य साझेदारहरूबाट अलग रहन अनुमति दिन्छ।
यो लेख पहिलो पटक https://www.jeuneafrique.com/1173234/politique/nadine-girault-lafrique-apprecie-lexpertise-quebecoise-et-son-pragmatisme-nord-americain/ मा देखा पर्‍यो
FYLY TYGA FRANGLISH MATT POKORA AMZA - भिडियो